Multi-Vitamin: May 2012
ယခင် တိုက်ခိုက်ရေး နည်းဗျူဟာများ
Who, me? ဟာ ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်တဲ့ ကန့် အနံ့ လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အမေရိကန် နည်းဗျူဟာ ရုံးမှ ဂျာမန် အရာရှိတွေကို ရှင်းဖို့ ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထုတ်ဖြင့်ထုတ်ပိုးထားနိုင်ပြီး အလွန်ပြင်ထန်သော မစင်အနံ့ နံပြီး ဒီအနံ့ပြန့်နှံခြင်းကို ထိန်းချူပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအနံ့ဟာ အလွန်ဖျောက်ဖျက်ရခက်ပြီး တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆိုရင် နှစ်ပါတ်ကြာပြီးအချိန်မှာတော့ အလိုလိုနေပြီး ဝမ်းနည်းကာ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းလာပြီး နောက်ဆုံး မှာ ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကိုတော့ အမှိုက်ပုံးထဲမှာထည့်ထားခြင်း၊ လမ်းကြားများမှာလွှင့်ပစ်ခဲ့ခြင်း တို့ဖြင့် ဖြန့်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြံဥာဏ်ကို တင်ပြသူကတော့ Pam Dalton ဆိုတဲ့ ဓါတု အနံ့ ဌာနက ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Anti-tank dogs ဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်နည်းကတော့ အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်း ခွေးမှာ ဗုံး/မိုင်း များကို တပ်ဆင်ပြီး တိုက်ခိုက် တဲ့နည်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တင့်ကားများ၊ လက်နက်တင်လာတဲ့ကားများ နှင့်မိမိတိုက်ခိုက်လိုတဲ့ ကားများကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးထားတယ် ခွေးများကို ဆာလောင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး တိုက်ခိုက် ပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွေးတွေကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုက ဂျာမဏီ တင့်ကားတွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးဖို့ အတွက် သီးသန့်မွေးထားခဲ့တဲ့ ခွေးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးတွေကို ရက်တော်တော်များများ အစာမကျွေးဘဲ အငတ်ထားကာ ပြီးနောက်မှာ တင့်ကားတွေ အောက်မှာ
Posted by 925 at 08:570comments
ဦးခေါင်းနောက် ကင်မရာတပ်ထားတဲ့ ပရောဖက်ဆာ
ကျောင်းသားအချို့က နောက်ကြသည်။ သူတို့ ဆရာရဲ့ ဦးခေါင်းနောက်ဖက်မှာ မျက်လုံးတွေ ရှိနေသည်ဟု။ နယူးယောခ့်မှ ပရော်ဖက်ဆာ ဆိတ်ဖွားတစ်ယောက် ကလည်း ထိုအတိုင်းဖြစ်နေသည်။
သူ့ခေါင်းနောက်ဖက် တည့်တည့်တွင် ကင်မရာ သေးသေးတစ်ခု ခွဲစိတ်တပ်ထားသည်။
နယူးယော့ခ် တက္ကသိုလ် Tisch အနုပညာကျောင်းမှ အီရတ်နိုင်ငံဖွား ဓါတ်ပုံပါမောက္ခ Wafaa Bilal ဆိုသူမှာ သူ့လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်
Posted by 925 at 09:082comments
Kenya Tree Coral က အာရုဏ်ကြောဝေဒနာ သက်သာစေနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိ
တရုတ်တိုင်ပေကမ်းလွန် ၃၃ ကီလိုမီတာအကွာခန့်တွင်ရှိသော
Green Island ကျွန်းပတ်လည်ရှိအပျော့စားသန္တာကျောက်ပွင့်များမှ
ထုတ်လုပ်ထားသော Capnellene ဓါတ်ပေါင်းသည် အာရုံကြော
ယိုယွင်းခြင်းကြောင့် ခံစားရသော နာကျင်မှုကို ကုသရာတွင် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများက
သမားရိုးကျ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများဖြစ်သော အက်စ်ပရင်နှင့်
သို့သော်လည်း Kenya Tree Coral သို့မဟုတ် Cap-nella imbricata က အာရုံကြောနာကျင်မှုကို သိသာစွာသက်သာစေသည်။သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကြွက်များတွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်
ယင်းကဲ့သို့ တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သန္တာကျောက်ပွင့်များမှထုတ်ယူသော ဓါတ်ပေါင်းများဖြင့်
အရေးပါသော ဆေးဝါးများကို ဖော်စပ်ပြီးလျှင် ထိရောက်စွာသုံးစွဲလျက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် HIVကုသရာတွင်သုံးသော ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး AZT သည်
Posted by 925 at 10:180comments
မိခင်များနေ့ မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမိခင်များအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်လျက် (Mother Of Mine)
Posted by 925 at 11:360comments
ကြက်ဖနဲ့ ကြက်မ (ဥာဏ်စမ်း)
ကြက်ဖတစ်ကောင်က ကြက်မတစ်ကောင်ကို မိတ်လိုက်ဖို့ နောက်ကလိုက်တယ်။ ကြက်မက ရှေ့ကပြေးတယ်။ ပြေးရင်း ပြေးရင်းနဲ့ ကျောက်လမ်းမပေါ်ရောက်သွားပြီး ကြက်မကို ကားတက်ကြိတ်သွားတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။
၁။ကြက်ဖက ကြက်မကို လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေးလဲ။
၂။ကြက်မက ရှေ့က ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေးလဲ။
၃။ကြက်မသေတာကြည့်ပြီး အပျိုကြီးက ဘာတွေးလဲ။
မြန်မာသူငယ်ချင်းဆိုက်မှ Jack San ရဲ့မေးခွန်းလေးပါ။
Posted by 925 at 10:354comments
Audi ကားကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မိုးပျံကား
Audi car ထုတ်လုပ်ရေးကုမဏ္ဍီကဘိန်းမပါတဲ့မိုးပျံကားတွေကိုစတင်ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပါပြီ ။
ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှု့ပြတနာတွေ ၊ အချိန်နှောင့်နှေးမှု့ပြသနာတွေ ၊ လောင်စာပြသနာတွေကို
လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်အောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကားတွေကိုဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်း
ချမယ်ဆိုတာတော့မသိရှိရသေးပါဘူး ။ ကားတွေကို Audi Shark Car လို့နံမည်ပေးထားပါတယ် ။
ဒိကားတွေကိုဝယ်ယူသူတွေကတော့လေယာဉ်မောင်းသင်တန်း ၊ လေယာဉ်မှုးသင်တန်း ၊
လေယာဉ်မယ် သင်တန်းအောင်မြင်တက်ရောက်ထားရပါမယ် ။ ဒီဇိုင်းကိုတော့ Mr. Kazim Doku
ကရေးဆွဲထားတာပါ ။ လေ့လာချင်ရင်တော့ www.kazimdoku.com မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
Audi Shark Car ရဲ့ Design တွေကိုဗဟုသုတနေနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ ။
 Audi Shark Car ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဖိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။
 Audi Shark Car ရဲ့အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။
 Audi Shark Car ရဲ့ဘေးလိုက်ဒီဇိုင်းပါ ။
 Audi Shark Car ရဲ့နောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းပါ ။
 Audi Shark Car မပျံသန်းမှီပုံဖြစ်ပါတယ် ။
Posted by 925 at 09:420comments
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ တစ်ပုဒ်တည်းသော ကဗျာလေးပါ။
ငါ .... အမှတ်မထင်
Posted by 925 at 09:243comments
အပြင်းပြေ Drum တီးရအောင်
>> ဇော်ဂျီ လက်ကွက် ပုံစံ <<
မြန်မာစာတွေကို ဖတ်လို့တော့ရပါတယ်..... ဒါပေမယ့် ရေးလို့မရရင်တော့ ဒီမှာ နှိပ်ပြီး
Email လိပ်စာထားခဲ့မယ်ဆိုရင် Post အသစ်တင်တိုင်း Gmail ကိုပို့ပေးပါမယ်။
မိန်းမ အင်္ဂါ နှစ်ခုပါသော အမျိုးသမီး
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ Hazel Jones ဟာ အမျိုးသမီး အင်္ဂါနှစ်ခု ၊ သားအိမ် နှစ်ခု ၊ သားအိမ်ပြွန် နှစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ...
လေယာဉ်မောင်းခန်း​တွင် လိင်ကိစ္စ ​သောင်း​ကျန်း​​သည့်​စုံတွဲ
​လေယာဉ်​မောင်း​ခန်း​အတွင်း​ အနီ​ရောင် ဝတ်စုံနှင့်​ အမျိုး​သမီး​က သူမ၏ အမျိုး​သား​ အ​ဖော်အား​ ပါး​စပ်ဖြင့်​ လိင်​ဖျော်​ဖြေ​နေ​သော ဓာတ်ပုံတစ်...
ကျောင်း​​သား​​​​ကျောင်း​​သူ စုံတွဲများ​​ကို အတူတကွ​​ရေချိုး​​ခွင့်​​ပေး​​သည့်​​​ တရုတ်တက္ကသိုလ်
တရုတ်နိုင်ငံ အ​​နောက်​​မြောက်ပိုင်း​​ ရှန်ဇီး​​ရှိ တက္ကသိုလ် တစ်ခုအတွင်း​​ အများ​​သုံး​​ ​​ရေချိုး​​ခန်း​​တစ်ခုတွင် ​​ကျောင်း​​သား​​​​ကျော...
ကလေးငယ်တွေကို ရက်စက်တဲ့နည်းနဲ့ရောဂါကုပေးတဲ့ သူတော်စင်
တစ်လောက facebook ထဲမှာ ဟိုးလေးတစ်ကြော်ဖြစ်သွားတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ပါတ်သက်လို့ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရအောင် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းသ...
အင်မတန် ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါ (PSAS) 18+
1 day 300 times OMG ! မီရှယ်လီသော်မဆမ် ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ တစ်ရက်ကို အကြိမ်ပေါင်း ၃ဝဝ လောက် လိင်ဆက်ဆံ လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ (Persistent S...
မအေတူသမီးလေး အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ တိုးတက်မှုတွေနဲ့ အတူ လူတွေလည်း စောစောစီးစီးအရွယ်ရောက်လာကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒီပုံမှာ ပါတာ ညီအစ်မ မဟုတ်ပါဘူး ...
လူမျက်နှာနှင့်တူသော ငါးကို အမေရိကန်တွင်ဖမ်းမိ
ဤအခြင်းအရာကို သင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သင့်ကို ရုတ်တရက် ထိတ်လန့်စေမှာလား ။ ဒါမှမဟုတ် မယုံနိုင်အောင် အံ့အားသင့်စေမှာလား ဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်ပဲ...
အသိဥာဏ် ဘဏ်တိုက်ဆီသို့ ....
The words in your mind ...
လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ လေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Kenya Tree Coral က အာရုဏ်ကြောဝေဒနာ သက်သာစေနိုင်ကြေ...
မိခင်များနေ့ မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမိခင်များအားလုံးအတွက် ...
အချက်အပြုတ် နဲ့ လက်သည်းအလှ
MAILS FROM FRIENDS
What's your IP address ???
ဘောလုံးပွဲများ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန်...
Ayacucho - Cajamarca
925. Picture Window theme. Powered by Blogger.